hwakagadzwa muna 2003, inova maindasitiri bhizinesi rinotarisa mumunda wepamusoro-kumagumo chikafu chinodyiwa, iine makore anopfuura gumi ekupinza nekutengesa kunze kwenyika maitiro uye akapfuma kushambadzira ruzivo mumunda wezvikafu zvekudya, inotsigirwa nehunyanzvi hwekutsvaga nekuvandudza hunyanzvi kugona, kuwedzera kweanogadzira kugona uye zviyero zvakanakira, kuwana kusangana kwemaindasitiri uye zvekurima zvakasanganiswa bhizinesi mashandiro mashandiro.
Iko kugona kweiyo nyowani indasitiri 4.0 yakajairwa popcorn fekitori, inozoiswa mukushanda gore rinouya, inogona kusvika mazana mashanu emamiriyoni euan. (74 mamirioni emadhora)
Iyo kambani inoita yakakura hombe chigadzirwa kushambadzira modhi, chiteshi kusimudzira rakasimba basa, yakakwira brand kuziva, zvigadzirwa zvinotengeswa mudzimba yepamusoro-kumagumo supamaketani macheni, KA zvitoro, zvemuno zvakasarudzika supamaketi, epasirese cheni manejimendi manejimendi uye ketani nyore zvitoro uye zvimwe zvekutengesa nzira. , EChina epamusoro zana mafomati ekutengesa ane kubatana.
Kambani Chiratidzo: Iva wepasi rose kambani FMCG.
Company Mission chiratidzo chebasa: rega munhu wese afarire mufaro wepopchibage!
Brand Vision: kuve wekutanga mhando yemapopcorn chikamu muChina.
Maitiro Ekutanga: kuvaka zviroto pamwe chete, tichitarisa pazvinhu zvitsva, kuvimbika pamwe nekudyidzana, zvichitungamira mukugona.
Popcorn misoro yemusoro: INDIAM
Akawanda zvitupa GLOBALGAP, ISO 22000.
Chikamu chepamusika chakakwirira: (mushandirapamwe chiteshi)
Kubudirira: Fekitori nyowani, marongero matsva, kuve wekutanga muChina, kupenya nyika.
Nyanzvi: Chikwata chehunyanzvi chekupinza uye chekutengesa kunze chakavakwa nematanho-erudzi matarenda.
Tarisa: ese mumapopcorn chinhu chimwe chete, kuti uwane iyo yekupedzisira chinhu chimwe ive yakakwana!
Kuisa pfungwa: Kuita mumuviri basa rechiratidzo uye kutarisisa mukugadzira zvirinani mhando uye isingadhuri popcorn.
Popcorn, semumiriri weiyo yekurapa tudyo, inogona kukurumidza kuwedzera mwero wedopamine secretion muuropi munguva pfupi, ichiita kuti vanhu vanzwe kufara, uye nekudaro zvakanyanya kunge kuravira kunotapira kwemapopcorn, inofanirwa-kuva nechingwa. yevaraidzo, kuona mabhaisikopo uye kubata pazvirongwa zveTV. Uye zvakare, popcorn isina makobvu uye macores ari nyore kudya uye anobatsira kuchena kwezvakatipoteredza; popcorn inogona zvakare kuvhura dzakasiyana nzira dzekudya, kunakidzwa nekunakidzwa uye nekunzwisisa.
1. Yakasarudzwa mbishi zvinhu: Indiam Popcorn inogadzirwa kubva kunze kwenyika chibage, yemhando yepamusoro maltose manyuchi uye inounzwa premium caramel kuona yakasikwa uye inotapira kuravira.
2. Kutsvaga Kune Hutano: Isu tinoshandisa mafuta echisikigo emafuta emichindwe akatorwa kubva kune yakaderera-mafuta, yakaderera-koriori mafuta emiriwo kuti uve nechokwadi chehutano hwezvigadzirwa zvedu.
3. Natural uye zvinonaka: Hutano mbishi zvigadzirwa, yakatenderera uye izere mabhora, crisp kuravira, yakajeka ruvara, isina yakaoma cores isina madhiri.
4. Yakasarudzika Tekinoroji: Indian popcorn yakafambira mberi otomatiki yekugadzira mutsara, ichishandisa mwenje kugocha kwazvino tekinoroji, iko kuwedzera kuri chaizvo, bhora rakatenderera uye rizere, slagging zvachose.
Maminetsi gumi nemana ekubheka kwekuravira kwechrispier: Mushure memazana ebvunzo, iyo 18-maminetsi ekubheka maitiro inovimbisa kuti hutano hwechigadzirwa pachacho uye nekrisiti kuravira kwechigadzirwa zvakagadziridzwa.
KUSHANDISA MAFAMBIRO KUyerera Chart
6. 18 maminetsi akadzika tembiricha kubheka
7.Kurongedza nekuisa chisimbiso
8. Kutonhora kwemhepo
Yekutanga mune yakaderera-tembiricha yekubheka maitiro eiri nani kuravira.
Chitarisiko chinozivikanwa zvikuru uye chinotakurika.
Own Brand + Own Fekitori + Kushambadzira + Professional Services
Kutarisira kuvaka kuvaka-kuhwina bhizinesi kubatana newe!
INDIAM popcorn, Caramel popcorn, popcorn, China Yakagadzirirwa Classroom,